🥇 Ukwenza ingxelo ngezityalo kunye nemveliso yemfuyo
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 727
Ividiyo ye-accounting yezityalo kunye nemveliso yemfuyo
Uku-odolwa kwengxelo malunga nesityalo kunye nemveliso yemfuyo
Ukwenza ingxelo ngezityalo kunye nemveliso yemfuyo. Nditsho negama lale nkqubo ibaluleke kakhulu kwaye iyimfuneko ibonakala iyadinisa kwaye inzima kubantu abangaqeqeshwanga. Ewe kunjalo, njengayo nayiphi na enye inkqubo, inokubanakho ukusebenza kwaye ibe nokugqwesa ngokugqibeleleyo. Kodwa ukubakho kweempazamo kuhlala kuhlala kwinqanaba eliphezulu. Njani ukuba? Ungayiphepha njani imingcipheko ephantse ifikeleleke, kwaye ufike kwimpumelelo eqinisekileyo? Ngapha koko, yonke into ilula. Ukuze ulawulo lwemveliso yezityalo kunye nemfuyo lufikeleleke kwaye lusebenze, izixhobo ezifanelekileyo zokunikwa kwengxelo kufuneka zisetyenziswe. Inokuba zizicelo zolwazi kunye nezicelo ezikhethekileyo zezolimo.
Isoftware ye-USU ibonelela ngolona phuhliso lubalaseleyo kule ndawo. Ukusebenza okunamandla kunye nokuguquguqukayo kwesicelo sobalo lwemveliso kukuvumela ukuba uququzelele ngokufanelekileyo imisebenzi yawo nawuphi na umbutho, nokuba yifama, ifama yabalimi, indawo yokugcina abantwana, okanye ifama yeenkukhu. Amandla ayo ahlukeneyo ngokukhawuleza adibanisa kunye nesityalo okanye imveliso yolawulo lwemfuyo. Inyathelo lokuqala apha kukwenza idathabheyisi ebanzi eqokelela ulwazi oluthe saa malunga nomsebenzi wakho. Umsebenzisi ngamnye unikwa igama lakhe lokungena kunye negama lokugqitha lokungena kuthungelwano lweshishini. Mnye kuphela umntu ovumelekileyo ukuba ayisebenzise ngexesha. Kwakhona, intloko yeshishini, njengomsebenzisi ophambili, ivunyelwe ukumisela ngokuzimeleyo amalungelo okufikelela kubasebenzi abaqhelekileyo. Le ndlela iyazigwebela ngokupheleleyo, njengoko ikuvumela ukuba uqinisekise inqanaba eliphezulu lokhuseleko lolwazi.
Inkqubo yokunikwa kwengxelo yezityalo kunye nemveliso yemfuyo ibonisa ulwazi oluhlaziyiweyo malunga nezimali zombutho, imisebenzi yezilwanyana, amandla ophuhliso, kunye nokusebenza kwabasebenzi. Ngokusekwe kolu lwazi lwezezimali, umphathi wombutho ucwangcisa uhlahlo-lwabiwo mali lwexesha elizayo, akhethe ezona ndlela zintle zophuhliso, asuse iintsilelo ezinokubakho, kwaye athathe amanyathelo okuzithintela. Umsebenzi wokukhangela umxholo ukunceda ufumane ngokukhawuleza ungeno olufunwayo. Ukwenza oku, kufuneka ufake iileta okanye amanani ambalwa, kwaye inkqubo ibonise ngokuzenzekelayo imatshisi esele ikho. Kwaye ukuze kungabikho manqaku abalulekileyo kubalo kwimveliso yezityalo okanye ukufuya imfuyo elahlekileyo, sinikezele ngobukho bokugcina. Igcina iikopi zokugcinwa kwamaxwebhu kwiziko ledatha eliphambili.
Iqonga ngokuzenzekelayo lenza inani elikhulu leengxelo zolawulo lweshishini. Awusayi kuphinda uzame ukuhlalutya iitafile ezingapheliyo kunye nokunciphisa ukutsalwa kwetyala, unokubeka ngokukhuselekileyo ukusebenza koomatshini kwisicelo se-elektroniki. Kwangelo xesha, ujongano olulula lunomdla nakwabasebenzisi abaninzi abangenamava. Kwaye uluhlu olubanzi lweelwimi kunye noyilo lwefestile esebenzayo iya konwaba nawuphi na umsebenzisi oqondayo kwaye yenze indlela yesiqhelo yemihla ngemihla ibe mnandi ngakumbi. Inkqubo yokunikwa kwengxelo yezityalo kunye nemveliso yemfuyo inokuncediswa kunye nemisebenzi enomdla kwaye eluncedo yomntu ngamnye. Umzekelo, hlaziya izakhono zakho zokuphatha kunye nebhayibhile yenkokeli yale mihla. Uya kukufundisa ukuba uzulazule ngobuchule kwilizwe lezoqoqosho lwentengiso kunye nokubala okunzima. Khetha i-Software ye-USU kwaye uthathe inyathelo eliya kwinkqubela phambili ekhawulezileyo. Isiseko sedatha esinamandla siqokelela onke amaqhekeza e-accounting. Apha unokufumana ezona zinto zibalulekileyo. Olu fakelo lunokudityaniswa ngempumelelo ekusebenzeni kwazo naziphi na iifama zabalimi, iifama, iifama zeenkukhu, izitalato, iiklabhu ze-canine, njl.
Inkqubo yobalo lwemveliso yezityalo kunye nemfuyo inoluhlu olwahlukileyo lwezakhono ezifunekayo kuwo onke amabakala omsebenzi wakho. Le nkqubo ibala xa ufuna ukwenza ukuthenga okulandelayo kokutya, kwaye yeyiphi impahla ekufuneka ithengwe kuqala. Unokwenza ukutya okukodwa kwisilwanyana ngasinye, kunye nokujonga iindleko zayo kwaye ukhethe ezona ndlela zinenzuzo. Isoftware ye-USU ikuvumela ukuba ubhalise iinkomo, amahashe, iigusha neebhokhwe, iinkukhu, iikati kunye nezinja, nkqu nemivundla. Ukusebenza ngokulula nangokufanelekileyo. Akukho nhlanganisela inzima, imiyalelo ekhutshiweyo, kunye ne-tinsel engeyomfuneko.
Zonke iintlobo zolawulo kunye neengxelo zezemali ziveliswa apha ngokuzenzekelayo, yiyo loo nto akufuneki uchithe ixesha kwindlela yesiqhelo.
Ayifuni zakhono ezizodwa okanye uqeqesho olude. Kwanele ukubukela ividiyo yoqeqesho kwiwebhusayithi yethu okanye ufumane iingcebiso kwiingcali ezikhokelayo ze-USU Software. Isicelo sokunikwa kwengxelo yezityalo kunye nemfuyo sixhasa iintlobo ngeentlobo zeefomathi zamaxwebhu. Thumela ifayile yakho ngqo ukuprinta ngaphandle kokukhathazeka ngokungenisa kunye nokukopa. Ukulawula inkuthazo yabasebenzi kulula kakhulu xa uncediswa ngumzi mveliso wedijithali. Makhe sibone ukuba yeyiphi enye into eyenziwa yi-USU Software kubathengi bayo.
Ukuqhubeka koxilongo kuya kunceda ekuchongeni abasebenzi abasebenzayo kwaye bavuze ngokwaneleyo ukukhuthala kwabo. Ukuphucula isantya sokuphendula kwiinguqu kwiimfuno zabathengi abanomdla kwiimveliso zakho, kwaye, ngenxa yoko, ukwandisa isiseko esikhoyo sabathengi. Inani lezongezelelo ezinomdla kwisicelo esingundoqo. Fumana amathuba angakumbi okuziphucula kunye nenkqubela phambili. Inguqulelo yasimahla yesicelo iyafumaneka ngohlobo lwedemo yayo nayiphi na into onokuyikhuphela. Isebenza iiveki ezimbini kuqwalaselo olusisiseko lweSoftware yeUSU. Imisebenzi enomdla ngakumbi ikulindile kwinguqulelo epheleleyo yenkqubo yobalo malunga nesityalo kunye nemveliso yemfuyo.